Momba anay | Visa an-tserasera India
Ity (www.karaoteca.com) dia tranonkala tsy miankina manolotra serivisy fampiharana an-tserasera ho an'ireo mpampiasa anay izay misy ny fanampiana amin'ny fangatahan'izy ireo ny Fanomezan-dàlana ho an'ny dia mankany India. Manolotra fandikan-teny amin'ny fiteny izahay, fampiharana fanamarinana, serivisy mpitondra fivavahana, fanovana endrika rakitra. Tsy manome torohevitra momba ny fifindra-monina izay mitaky fahazoan-dàlana izahay. Ity tranonkala ity dia tantanin'ny Twelve Dimension PTY LTD. Ny fangatahana ny e-Visa Indiana amin'ny alàlan'ny tranokalanay dia manamora ny dingana ary manamora ny fangatahana. Izany dia satria ny masoivohonay dia manampy ireo mpampiasa mangataka ny e-Visa Indiana hameno ny taratasin'izy ireo, hamerina hijery ny valinteniny, handika ny vaovao ho azy ireo raha ilaina, ary hanamarina ny zava-drehetra ho an'ny fahamarinany, ny fahafenoana ary ny fahadisoana amin'ny fitsipi-pitenenana sy ny tsipelina. Raha misy fampahalalana fanampiny takiana amin'ny mpanjifa dia ataonay antoka ny hifandray mivantana amin'izy ireo. Rehefa vitan'ny mpangataka ny famenoana ny taratasy fangatahany, ny manam-pahaizana momba ny fifindra-monina dia mandinika izany manontolo alohan'ny hatolotra ny governemantan'i India amin'ny farany ho fankatoavana. Ny vokatra farany amin'ny fangatahana, na omena na tsia, dia manapa-kevitra tanteraka ny Governemanta India, fa ny fampiasana ny fahaiza-manaonay mandritra ny famenoana ny taratasy fangatahanao dia manome antoka fa tsy misy hadisoana ny fangatahanao izay zava-dehibe raha te hahazo vokatra tsara indrindra ianao.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia tsy haharitra 48 ora mahery ny fikarakarana sy ny fanomezana ny fangatahana raha tsy misy fampahalalana navela na tsy nampidirina araka ny tokony ho izy, ka mety ho tara ny fangatahana. Na izany na tsy izany, hanara-maso ny fampiharana rehetra izahay ary hampandre ny mpanjifa. Raha vantany vao neken'ny Governemanta India ny fangatahana e-Visa Indiana, dia hahazo izany amin'ny alàlan'ny mailaka ary koa fampahalalana bebe kokoa momba izany sy toro-hevitra hampiasana azy ny mpanjifa.
Any Aostralia sy Oseania izahay ary afaka manampy ireo mpangataka amin'ny fangatahana Visa amin'ny fotoana rehetra sy na aiza na aiza. Ny tranokalanay dia tsy miankina ary tsy misy ifandraisany amin'ny Governemanta India. Ny fampiharana amin'ny alàlan'ny tranokalanay fa tsy ny tranokalan'ny Governemanta Indiana ho an'ny e-Visa dia manana tombony fanampiny amin'ny fahazoana fanampiana sy fitarihana amin'ny fangatahanao ary hojeren'ny ekipa manam-pahaizanay. Mandoa vola kely izahay amin'ny serivisy.
Raha sendra manana fanontaniana na fisalasalana ianao dia azonao atao izany Mifandraisa aminay amin'ny helpdesk.
Tontalin'ny sarany (anisan'izany ny fandikan-teny sy ny famerenana)
Tourist 30 andro $99
Tourist 1 taona $198
Mpizaha tany 5 taona $298
Mpanatrika mpitsabo $198
Ny fizotran'ny fampiharana eVisa
Ny fangatahana ny e-Visa Indiana, na ny e-Visa Tourist, ny Business e-Visa, ny Medical e-Visa, na ny Medical Attendant e-Visa, dia ho hitan'ny mpampiasa fa tena tsotra tokoa ny dingana amin'ny sehatry ny mpampiasa anay. Mikarakara ny fiarovana sy ny tsiambaratelon'ny mpanjifanay ihany koa izahay ary noho izany dia tsy mampiasa afa-tsy ny teknolojia farany sy azo antoka indrindra izahay mba ho azo antoka ny fizotran'ny fangatahana manontolo, anisan'izany ny fandoavana.
Ny serivisy omenay raha oharina amin'ny masoivoho
Afaka mihatra amin'ny Internet 24/7 365 andro isan-taona.
24 / 7 Fanohanana sy Fanampiana.